Ngingaba Kanjani Ne-Pinterest Ngaphandle Kokulanda? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
May 12, 2021 0 Comentarios 536
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi iPinterest yipulatifomu enzima ukuyisebenzisa lapho kungekho khona ithuba lokuba omunye we abantu ababukwa kakhulu emsamo. Kodwa-ke, ngaphakathi kwesigaba se-Intanethi, izindlela ezahlukahlukene zingenziwa ngaphandle kokuyekethisa ukugcinwa kwamadivayisi.
Kodwa-ke, namuhla kunezindlela eziningi zokunquma ukuthi izinhlelo ezithile zingasetshenziswa kanjani ngaphandle kwesidingo sokuvula uhlelo oluthile kusayithi. Lokhu ngaphandle kokungabaza, kuyindlela yokuphefumula yabathandi bomhlaba we-elekthronikhi kanye nakulabo abafuna ukuthola izinto ezingcono ezigcina wonke amathuluzi ayingozi engekho.
Ngakho ngezansi ungabona ungaba kanjani nePinterest ngaphandle kokulanda uhlelo lokusebenza, kanye nokujabulela ipulatifomu ngaphandle kwenkinga. Konke lokhu kubonga umzamo oqhubekayo wabasebenzi emhlabeni wobuchwepheshe.
Kungenzeka yini ukuba nePinterest ngaphandle kokulanda?
Ukuphendula lo mbuzo, awudingi ukuhlala kakhulu kulolu daba ngoba kungenzeka ukuthi usebenzise iPinterest njalo ngaphakathi kwepulatifomu ngaphandle kokulanda uhlelo lokusebenza. Ngenxa yalezi zinhlobo zezimo abasebenzisi akudingeki bachithe isikhathi esiningi kususa ezinye izinto ukwenza indawo.
Ngaphezu kwalokho, kukhona futhi wonke amathuba okuthi ipulatifomu isebenza kahle ngaphandle komkhawulo. Ukunikezwe konke lokhu, sizokukhombisa ngezansi ukuthi kanjani thola ukufinyelela kungxenyekazi yePinterest ngaphandle kokulanda uhlelo lokusebenza kudivayisi ye-elektroniki.
Ngabe iPinterest ithatha isikhala esiningi?
Ikhasi le-Pinterest alithathi isikhala esiningi, empeleni okungadala ukusetshenziswa okuncane kokugcina kukhona izikhonkwane ezigcinwa ngaphakathi kwepulatifomu. Ngokunikezwe lokhu, umqondo omuhle ukugcina amafayela ekhadini le-SD ukugwema noma yiziphi izinkinga.
Izinyathelo zokuthola iPinterest ngaphandle kokulanda
Manje, akuthathi umsebenzi omningi ukuthola inzuzo yokusebenzisa iPinterest ngaphansi komthetho wokungakutholi ukugcwala kwe isitoreji sangaphakathi nohlelo. Njengoba unikezwe lokhu, sizokukhombisa lezi zinyathelo ezingezansi ukuze ufunde kangcono futhi uthole ukuthi kungenzeka yini uzinike amandla ngengxenyekazi.
Faka ipulatifomu yePinterest
Noma ngabe ubhalisile noma cha, esinye sezinyathelo okufanele uzilandele ukudala i-imeyili kanye ne-password ukuze ukwazi ukufaka ithuluzi. Kungenzeka futhi xhuma idatha kuma-akhawunti weGoogle noma we-Facebook.
Lapho usuyifakile imininingwane eyiyo, uzothola ikhasi eliqondisa kabusha ukuze uqhubeke nemisebenzi ekulo.
Khetha ama-affinities akho
Akukho lutho olumnandi ngaphakathi kwePinterest njengokwazi ukukhetha konke ofuna ukukubona, futhi ekuqaleni ikhasi likhuthaza lezi zinhlobo zemisebenzi. Ngakho-ke kufanele uthole ukuthi yini oyithandayo bese uyisebenzisela inzuzo yakho.
Phina iPinterest efonini yakho
Isinyathelo sokugcina, ngemuva kokuvuselela ithuluzi lonke, ukuthola ithuba lokusesha izinketho zezilungiselelo: "Phina ekhasini eliyinhloko." Ngemuva kwalokho, ungafinyeleleka ngokuphelele ekhasini nganoma yisiphi isikhathi sosuku.
1 Kungenzeka yini ukuba nePinterest ngaphandle kokulanda?
1.1 Ngabe iPinterest ithatha isikhala esiningi?
2 Izinyathelo zokuthola iPinterest ngaphandle kokulanda
2.1 Faka ipulatifomu yePinterest
2.2 Khetha ama-affinities akho
2.3 Phina iPinterest efonini yakho